Isahluko 59 | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
Funa intando Yami ngokwengeziwe ezimweni ohlangana nazo futhi nakanjani uyothola ukuvunywa Yimi. Uma nje usazimisele ukufuna nokugcina inhliziyo engihloniphayo, ngiyokunika konke lokho okuntulayo. Ibandla manje lingena ekwenzeni okusemthethweni futhi zonke izinto zingena emzileni ofanele. Izinto azisenjengoba zazinjalo lapho waba khona nokunambitha izinto ezazizofika. Akasafanele udideke noma ungabi nokwahlukanisa. Kungani ngidinga ukuba ningene kokungokoqobo kukho konke? Ngabe nikuzwe ngempela lokhu? Ngabe ninganganelisa kulokho engikufuna kini, njengoba nje nginanelisa? Ningakhohlisi! Akulutho olungaphezu kokunibekezelela Kwami kaninginingi futhi nokho nilokhu niphindaphinda ningakwazi ukubona okunilungele, futhi nehluleka ukukhombisa ukubonga!
Ukulunga Kwami, ubukhosi Bami, ukwahlulela Kwami nothando Lwami—zonke lezi zinto eziyilokho enginakho nengiyikho—uzinambithile ngempela? Ngempela awucabangi kakhulu futhi awuyiboni intando Yami. Ngikutshele kaningi ukuthi amadili engiwalungisayo kufanele anambithwe yinina, kodwa niyawenqaba kaningi futhi anikwazi ukwahlukanisa isimo esihle kwesibi. Yisiphi kulezi zimo esakhiwe yini uqobo? Futhi yiziphi ezihlelwe yizandla Zami? Ningazivikeli! Ngibona konke ngokucacile futhi kuwukuthi nje anithungathi. Yini enye engingayisho?
Ngiyohlala ngiduduza bonke labo ababona intando Yami futhi ngeke ngibavumele ukuba bahlupheke noma balimale. Into ebaluleke kakhulu manje ukuba ukwazi ukwenza ngokuhambisana nentando Yami, futhi labo abenza lokhu nakanjani bazokwamukela izibusiso Zami futhi babe ngaphansi kokuvikela Kwami. Ngubani phakathi kwenu ongazikhandla ngokugcwele ngenxa Yami futhi anikele konke okwakhe ngenxa Yami? Nonke aninamdlandla, imicabango yenu iyazungeza izungeze, icabanga ngekhaya, izwe elingaphandle, ukudla nokokugqoka. Ngaphezu kweqiniso lokuthi uphambi Kwami ungenzela izinto, enhliziyweni Yakho usacabanga ngomkakho, abantabakho nabazali bakho ekhaya. Ngabe bonke bayinto Yakho? Kungani ungababeki ezandleni Zami? Awukholwa ngokwanele Kimi? Noma ngukuthi wesaba ukuthi ngiyokwenzela amalungiselelo angafanele? Kungani uhlala ukhumbula ikhaya? Futhi ukhumbula abanye abantu! Ngabe nginaso isikhundla esithile enhliziyweni yakho? Futhi usakhuluma ngokungivumela ngibe nokubusa phakathi kuwe futhi ngihlale kubo bonke ubuwena—konke lokhu kungamanga okukhohlisa! Bangaki kinina abangabebandla ngazo zonke izinhliziyo zenu? Futhi ngubani phakathi kwenu ongazicabangi yena, kodwa ongowombuso wanamuhla? Cabanga ngokucophelela kakhulu ngalokhu.
Ningidudulele kuleli zinga, ngakho ngingasebenzisa kuphela izandla Zami ukunigqugquzela. Lokhu kungenxa yokuthi nginguNkulunkulu ohlakaniphile, futhi ngiphatha abantu abehlukene ngezindlela ezahlukene, kuye nokuthi nithembeke kanjani Kimi. NginguNkulunkulu onamandla onke—ngubani olokotha ukuvimba izinyathelo Zami eziya phambili? Noma ngubani olokotha angathembeki Kimi, isandla sezinqumo Zami zokuphatha kusuka manje kuya phambili nakanjani siyohlala siphezu kwabo, ukuze benziwe bazi ukuba namandla onke Kwami. Engikufisayo akubona abantu abaningi kakhulu, kodwa abambalwa abakhethiweyo. Ngiyoshiya futhi ngijezise noma ngubani ongethembekile, ongeqotho, noma ngubani oziphatha ngokungaqondile nangenkohliso. Ungabe usacabanga ukuthi nginesihawu, noma ukuthi nginothando nomusa; lokhu kunguwe nje uzikhohlisa. Ngiyazi ukuthi uma ngikuncokolisa ngokwengeziwe uba nombono ophambene ngokwengeziwe futhi ungabi namdlandla wokwenza, uphinde ungazimiseli ukuzidela. Lapho abantu belukhuni kuze kube kuleli zinga ngingabagqugquzela kuphela futhi ngibadonse njalo. Yazi lokhu! Kusuka Manje kuya phambili nginguNkulunkulu owahlulelayo; angiseyena uNkulunkulu onesihawu, onomusa futhi onothando wokucabanga komuntu!
Iminyaka eminingi uMoya kaNkulunkulu ubefuna ngokungaphezi njengoba esebenza emhlabeni. Ezinkathini eziningi uNkulunkulu usesebenzise abantu abaningi …
Impumelelo Noma Ukwehluleka Kuncike Endleleni Umuntu Ayihambayo Abantu abaningi bakholwa kuNkulunkulu ngenxa yekusasa labo, noma ngenxa yenjabulo yesi…